Khayre iyo Deni oo kulan gaar ah yeeshay kahor shirka maamulada iyo DF
Khayre iyo Deni oo kulmay kahor shirka DF Soomaaliya iyo maamulada
GAROWE, Puntland – Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlada Puntland ayaa Habeenimadii Jimcada kulan gaar ah waxa ay ku yeesheen magaalada Garowe kahor shirka guud ee maamulada iyo dowlada dhexe.
Kulankaan ayaa waxaa uu ka qabsoomay hoyga uu Xasan Cali Khayre, wasiirka koowaad ee xukuumada federaalka, ka degan yahay xarunta gobolka Nugaal, oo galabnimadii Jimcada uu ka degay.
Saciid Cabdullaahi Deni, hogaamiyaha maamulka 20-sano jirka ah iyo Khayre ayaa waxay kawada hadleen xaalada guud ee dalka iyaga oo iska xog-wareystay dhinacyo ay siyaasada kamid tahay.
Wararka ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay isla soo qaadeen Shirka Wadatashiga ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe kaasi oo Sabtida ka furmaya magaalada Garowe.
Isu imaatinkaasi oo uu horey u shaaciyay madaxweyne Deni ayaa looga arrinsan doonaa siyaasada, amniga, doorashooyinka qaranka iyo dhameystirka dastuurka oo qaabka uu u socdo si wayn loo dhaliilay.
Kulanka ayaa imaanaya iyada oo ay taagan tahay xiisad ka dhalatay Sharciga Doorashooyinka Qaranka, kaasi oo ay kasoo horjeesteen maamulada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug.
Xeerkaan oo ka kooban 61 qodob oo ku qoran 36 bog ayay dowlad goboleedyaddu shaaciyeen in ay ku qaadaceen "maadaama aanan laga talogelin" xili ay ku jiraan qodobo kale oo muran dhaliyey. [Halkaan ka akhriso fahfaahinta]
Xukuumada Khayre oo lagu eedeeyay in ay isku koobtay go’aanada masiirigi ayaa rajeyneysa in Shirka Wadatashiga uu xal uga soo dhex baxo iyada oo hogaamiyeyaasha ay rajo ka qabaan in uu noqdo mid miro dhal ah.
Deni oo si adag dhaliilay Qorshaha Horumarinta ee XF Soomaaliya
Puntland 07.08.2019. 15:14
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa wuxuu si adag u dhaliilay qorsheyaasha horumarinta ee ay diyaarisay xukuumadda Soomaaliya.
Mahad Salaad oo Villa Soomaaliya ku weeraray Baraha Bulshada
Soomaliya 06.01.2018. 20:02
Deni oo dhaliilay qorshaha xukuumada federaalka ee xasilinta Muqdisho
Puntland 02.08.2019. 13:32
Caqabad soo wajahday Shirka Maamulada iyo DF ee Garowe [XOG]
Puntland 07.05.2019. 23:46
Soo dhaweynta madaxda maamulada iyo DF oo ka socota Garowe
Puntland 03.05.2019. 14:57
Deni oo ka warbixiyay safarkiisii ugu horeeyay ee Imaaraadka [Daawo]
War Saxaafaded 08.04.2019. 15:09
Gudoomiyaha Hay'adda Wadooyinka Puntland oo shaqada laga joojiyey
Puntland 18.07.2019. 08:02